ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 32.2 ဆရာကန်တော့ပွဲငွေ ငါးဆယ် အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့သူကို မကြောက်ကြသူများ
32.2 ဆရာကန်တော့ပွဲငွေ ငါးဆယ် အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့သူကို မကြောက်ကြသူများ
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက် (၉) ရက်လောက် ရွာပြန်ဖို့ ကျွန်တော်စိတ်ကူး ထားပါတယ်..။ မမ ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပါ..။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ.. ဆမိတ်ခုံ ရွာက နဗန သေးသေးလေးတွေအတွက် နောက်ထပ် အလှူရှင် နှစ်ယောက် ထပ်ပေါ်လာပါတယ်..။
သူတို့နဲ့ ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း ဂျီတော့မှာ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ် ကအစပြုလို့ စကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြရင်းကနေ ရွာက ကလေးငယ်များအတွက်.. အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း တခုခုလုပ်ပေးပါဆိုပြီး လှူကြတာပါပဲ..။
တစ်ယောက်က ဂျပန်မှာနေတဲ့ ညီမငယ် တစ်ယောက်ပါ..။ (ညီမငယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တာပါ.. ကိုယ့်အသက်ကို လျှော့မတွက်ရဲလို့ ညီမလို့ ခေါ်လိုက်တာပါ ဟဲဟဲ )
ဆင်းရဲပြီး ပညာတော်တဲ့ ကလေးတွေကို လက်ရှိထောက်ပံ့ပြီး ဆေးကျောင်းထားပေးနေတဲ့ ကြားက ဆမိတ်ခုံက ကလေးငယ်များအတွက်.. တစ်သိန်းနှစ်သောင်း လှူမယ် ပြောလာလို့ ကျွန်တော့်မှာ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာ ရပါတယ်..။
နောက်ညီမငယ် တစ်ယောက်ကတော့ “ ဆင်းရဲပြီး မတတ်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်များကို ရည်ရွယ်တယ် ” ဆိုပြီး သုံးသိန်းလှူပါတယ်..။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ် စီဘောက်မှာ.. ငွေအိမ်စံ ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ ၀င်ဝင်ရေးတဲ့ ညီမငယ် ဖြစ်ပါတယ်..။
သူတို့ကို ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန် ရွာကအပြန်.. ရန်ကုန်မန္တလေး ကားလမ်းတလျှောက် မြင်ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေ ဂျီတော့မှာ ပြန်ပြောဖြစ်တယ်..။
ပဲနွယ်ကုံး၊ ကျောက်တံခါး နားဖြတ်တော့ ကုလားမကြီးတွေ ဆာရီကြီးတွေ တလွင့်လွင့်နဲ့ စပါးခင်းထဲ ချွေးတလုံးလုံး ဖုန်တထောင်းထောင်း နဲ့ စပါးလှေ့ နေတာ တွေ့တော့ “ အော်.. တို့လူမျိုးတွေ.. ကုလားဗမာမရွေး.. အားလုံး တတန်းတည်း မွဲနေကြပါ့လား ” ဆိုတဲ့ အတွေးတစ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်..။
အဲဒါလေး ကို သူတို့နဲ့ ပြောဖြစ်ပါတယ်..။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ.. ဆမိတ်ခုံမှ မဟုတ်ပါဘူး..။ နေရာတော်တော်များများမှာ.. အကူအညီဆိုတာ လိုနေတာပါ..။ ဆရာဖေမြင့်ရေးတဲ့ ကမ်းစပ်ပေါ် ဒီလှိုင်းနဲ့ မေးတင်လာတဲ့ ကြယ်ငါးတွေလို သဘောထားပြီး ကိုယ့်နီးစပ်ရာ ကိုယ်လက်လှမ်းမီရာ တတ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ကြဖို့ပဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်..။
အလှူရှင်များကိုတော့ အရမ်းအရမ်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..။ ငယ်ငယ်တုံးက ဆရာကန်တော့ပွဲ ငွေငါးဆယ် အလွဲသုံးစားလုပ်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည် လှူတာနဲ့တင်.. ကျွန်တော်က ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေ ပါပြီ..။ ဟဲဟဲ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သူတို့ စိတ်မပျက်စေရပါဘူး..။ သူတို့ရဲ. အလှူကို ထိထိရောက်ရောက် အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်ကို ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကျွန်တော် ကတိပြုပါတယ်..။
Posted by navana at 2:09 PM
Thanks for sharing. I like your blog.